Global Voices teny Malagasy » Tsy Ampy Ny Rano Any São Paulo, Nefa Tsy Mety Manao Fitsinjarana Rano Ny Mpitondra · Global Voices teny Malagasy » Print
Tsy Ampy Ny Rano Any São Paulo, Nefa Tsy Mety Manao Fitsinjarana Rano Ny Mpitondra
Voadika ny 23 Novambra 2014 3:32 GMT 1	 · Mpanoratra Taisa Sganzerla Nandika Nancy
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Mandalo ny fotoan-tsarotra ratsy indrindra tato anatin'ny am-polo taona maro izao ho azy amin'ny resaka rano i São Paulo, fanjakana be mponina indrindra any Brezila. Ny fotoanan'ny lohataona, izay tena tsy ampy orana tao anatin'ny 84 taona, no nahatonga ny haintany izay mahakasika tanàna 70 hatramin'izao, ary miantraika amin'ny fiainan'ny olona 13.8 tapitrisa 
Ny 38 amin'ireo tanàna ireo no nanomboka nanao drafitra fitsinjarana rano, ka ampifandimbiasina isan-kerinandro ny famatsiana ireo faritra manodidina. Na dia izany aza dia iray amin'ireo raharaha tena atahorana ny ao an-tanànan'i São Paulo, renivohitry ny fanjakana sady renivohitra lehibe indrindra any Amerika Latina. Amin'izao fotoana izao, dia efa tonga amin'ny fetra farany ambany, 4,1 isanjaton'ny habetsahany zakany ny Rafitra Cantareira , tahirin-drano itambaranà farihy efatra, miandraikitra ny famatsiana rano ny 45 isanjaton'ny faritry ny renivohitra ( misy mponina manodidina ny 6.5 tapitrisa) sy ireo tanàn-dehibe hafa manodidina.
Na dia izany aza anefa dia efa am-bolana maro ny mpitondra fanjakana sy ny Sabesp, orinasam-panjakana mitantana ny Rafitra Cantareira, no tsy nanaiky ny mety hisian'ny fahampian'ny rano ao an-drenivohitra  ary nandà ny fananganana ny drafi-pitsinjarana toy ny nataon'ireo tanàn-dehibe hafa. Nefa efa hatramin'ny fiandohan'ity taona ity ny mponina amin'ny faritra maro ao São Paulo no nitaraina amin'ny fahatapahan-drano isan-kerinandro na isan'andro. Vao tamin'ity herinandro ity dia sekolim-panjakana 34 ao an-tanàna no nanana olana tamin'ny famatsian-drano -  ary iray raha kely indrindra no nampiato ny fampianarany noho io antony io.
Ny olona sasany dia mino fa misy fitsinjarana rano an-kinafinafina mahazo azy ireo. Ao amin'ny tranonkala Faltou Água  (Tsy misy rano) dia misy sarintany iombonana mampiseho ireo toerana izay lazain'ny mpampiasa fa misy fahatapahan'ny famatsian-drano.
Ireto ambany ireto misy hafatra voafantina nozaraina tao amin'io tranonkala io tamin'ny Aogositra sy Septambra :
Fahatapahan-drano manomboka ny misasakalina hatramin'ny 6 ora maraina ao Jardim São Paulo, faritra avaratra. Efa ho herinandro izay fara-fahakeliny.
Tapaka isak'alina ny rano aty VI Monumento. Isaky ny sasakalina no fanombohany fa tapahany aloha kokoa izany isan'andro. Manomboka amin'ny 9 ora alina izao androany dia efa tsy misy intsony ny rano.
Any Vila Madalena, efa ho roa volana izao no tapaka isak'alina ny rano.
Na dia izany aza, maro amin'ireo mponina ao São Paulo no tsy miaina akory izany olan'ny famatsian-dranony izany. Ho fanazavana izany dia manana hevitra mahaliana i Vinícius Duarte izay zarainy ao amin'ny Facebook :
Maro amin'ireo mponin'i tanàn-dehibe ao São Paulo no MBOLA tsy mahatsapa akory ny tsy fahampian-drano ( ary mino ny mpitondra fanjakana, sy mbola mandany rano sy mivazivazy amin'io resaka io) noho ny antony tsotra : mipetraka aminà trano tsara izy. Rehefa tapahan'ny Sabesp ny famatsian-drano (isan'andro), dia mbola mandeha ihany ny rano amin'ny paompin-dry zareo ary dia mihevitra izy ireo fa mety tsara ny zava-drehetra. Nefa avy amin'ny tahirin-drano iombonan'ilay trano io rano io. Misy ireo trano sasany mampiasa rano kely noho ny an'ny hafa, dia mifameno ny fandanian-dry zareo mazava ho azy. Nefa miankina amin'ny fisian'ny rano ao anaty sinibe iraisany no faharetan'izany.
Efa mila ho fongana ny Rafitra Cantareira
Nampahafantarin'ny Biraon'ny Fampanoavana ao amin'ny fanjakana fa efa fantatry ny Sabesp hatramin'ny 2012, fa mety hisy ny tsy fahampian'ny rano.  Tamin'izany fotoana izany dia nandefa tatitra tany amin'ny mpamatsy vola azy tany New York ilay orinasa – ny 25,4 amin'ny anjarany dia nifampiraharahana tamin'ny tsenam-bola tao New York – nampitandrina mialoha ny mety hisy haintany amin'ny Aprily 2014 ary mety hisy fiantraikany amin'ny fitantanam-bolany izany. Na izany aza anefa dia vao valo volana lasa izay no mba nanapakevitra ny handray fepetra ny Sabesp : ny fihenam-bidy ho an'ireo mpanjifa izay mitsitsy rano no paikady fototra hiadiana amin'ny faharitràn'ilay siniben-drano voalohany efa ho ritra.
Hatramin'ny volana May, efa nampiasa ny andiany voalohany amin'ny ” hadiry maty” ( ny ambin-drano kely sisa ery amin'ny faribodin'ny farihy) ilay orinasa. Noraràn'ny mpanara-maso ny fakàna andiany faharoa amin'io hadiry io noho ny tahotra fa tsy hanjary ny fitantànana io famatsian-drano io, nefa nofoanana omaly 16 Okt izany fanapahan-kevitra izany noho ny hamehana  satria tsy naharitra afa-tsy herinandro vitsy monja ilay andiany voalohany.
Rano 106 lavitrisa litatra ilay andiany faharoa ary tokony haharitra hatramin'ny Martsa 2015 raha tsy misy fitsinjarana. Aorian'izay, dia tsy misy intsony : tsy misy ny hadiry maty andiany “fahatelo” ao amin'ny Cantareira. Ny hany sisa tavela dia ny fanantenana fa ny rotsakorana mandritra ny fotoam-pahavaratra, izay betsaka ny volana Desambra ka hatramin'ny Febroary, dia ho ampy hamatsiana rano misimisy kokoa mandritra ireo volana ambiny amin'ny taona 2015.
Nametraka ity ho an'ireo mpanara-dia azy maherin'ny 1.600 ao amin'ny Facebook ny mpitoraka bilaogy Camilla Pavanelli  :
Izao ihany ny tetikasan'ny mpitondra fanjakana : mandritra ny tahirin-drano hatramin'izay teten-drano farany indrindra sy mivavaka mba ho avy ny orana. Tsy misy ny tetika B. Ka rehefa izany, heveriko fa fotoana izao hanekentsika ny zavatra rehetra : tapitra ny fotoana fieritreretana momba ny hampiasana amin'ny tokony ho izy sy amim-pahatsiarovan-tena ny rano. Lasa iny ny sambo. Tsy ny hoe :” mampiasa azy am-pahendrena mba tsy haharìtra azy” no fototry ny adihevitra amin'izao fotoana izao. Efa tapitra izany- na efa lany izany, raha heverintsika fa nanjifa ny ‘hadirin-drano maty’ isika.
Inoan'ireo manam-pahaizana manokana fa efa-taona fara-fahakeliny vao afaka hiverina hiasa ara-dalàna indray ilay rafitra,  nefa miankina amin'ny fahatratraran'ny rotsakorana ny haavo ara-tantara izany vinavina izany. Mitetika ny hitarika rano avy amin'ireo renirano hafa ilay rafitra fananganana fotodrafitrasa fototra ary ireo siniben-drano ao amin'ny firenena dia tsy ho vonona raha tsy amin'ny 2016, araka ny tetiandro nataon'ny Sabesp.
Ny any ambanivohitra
Misy tanàna ambanivohitra 38 izao no efa ofisialy fa hanaovana ny fitsinjarana rano. Tsy ny Sabesp no manara-maso ireo tanàna ireo fa manana ireo orinasa madinika ao an-toerana miandraikitra ny famatsiana ranon-dry zareo.
Ny tombontsoa amin'ny fitsinjarana rano ôfisialy dia fantatry ny olona ny fotoana sy ny ora hahatapahana'ny rano – ka dia afaka miomana izy ireo mba tsy ho tratry ny tampoka.
Tsy mahasakana ny fivoriana sy ny fanoherana izany. Na dia izany aza, dia efa niaina tamin'ny fitsinjarana rano sy ratsy famatsiana ny nanerana an'i Itu, tanàna misy mponina 163.000 hatramin'ny volana Febroary, distrika tsy maintsy mividy rano 3 tapitrisa litatra isan'andro any amin'ireo tanàna mpifanolo-bodirindrina. Nifamory faninefany hanohitra ny tsy fahampian-drano ny mponina  tamin'ny Alahady teo, nisakan-dàlana sy nandoro fiarabe fitaterana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/11/23/65159/
 mahakasika tanàna 70 hatramin'izao, ary miantraika amin'ny fiainan'ny olona 13.8 tapitrisa: http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sp-tem-70-cidades-afetadas-por-seca-onde-vivem-13-8-mi,1577466
 efa tonga amin'ny fetra farany ambany, 4,1 isanjaton'ny habetsahany zakany ny Rafitra Cantareira: http://www2.sabesp.com.br/mananciais/DivulgacaoSiteSabesp.aspx
 tsy nanaiky ny mety hisian'ny fahampian'ny rano ao an-drenivohitra: http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,nao-ha-necessidade-de-racionamento-em-sp-afirma-alckmin,1538664
 sekolim-panjakana 34 ao an-tanàna no nanana olana tamin'ny famatsian-drano -: http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,desabastecimento-de-agua-ja-afeta-34-escolas-de-sao-paulo,1577461
 zarainy ao amin'ny Facebook: https://www.facebook.com/vinicius.duarte.399/posts/869762433034659
 efa fantatry ny Sabesp hatramin'ny 2012, fa mety hisy ny tsy fahampian'ny rano. : http://spressosp.com.br/2014/10/09/sabesp-sabia-risco-cantareira-desde-2012-afirma-mp/
 Na izany aza anefa dia vao valo volana lasa izay no mba nanapakevitra ny handray fepetra ny Sabesp : : http://m.estadao.com.br/noticias/ali%C3%A1s,o-jorro-do-hidronegocio,1575090,0.htm
 nofoanana omaly 16 Okt izany fanapahan-kevitra izany noho ny hamehana: http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,justica-derruba-liminar-que-barrava-2-volume-morto-do-cantareira,1577893
 Nametraka ity ho an'ireo mpanara-dia azy maherin'ny 1.600 ao amin'ny Facebook : https://www.facebook.com/camilalpav/posts/10205058753417101
 Inoan'ireo manam-pahaizana manokana fa efa-taona fara-fahakeliny vao afaka hiverina hiasa ara-dalàna indray ilay rafitra,: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1531491-cantareira-so-volta-ao-normal-em-4-anos-dizem-especialistas.shtml
 Nifamory faninefany hanohitra ny tsy fahampian-drano ny mponina : http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1531628-protestos-por-falta-de-agua-em-itu-terminam-em-onibus-incendiado.shtml